June 2017 - iftineducation.com
Daawo:- La Kulan Gabadha Uu Dhalay Chunky Pandey Ee Ananya Pandey Oo Goor Dhow Bollywood-ka Kusoo Biiri Doonto
Chunky Pandey wuxuu ahaa jilaayaasha ka dhax muuqday bollywood-ka 90-kii laakiin 2000 ka dib wuxu bilaabay in filimaanta uu ku yeesho muuqal kooban ilaa uu ka noqdo shactaroole laga danbeeyo. Jilaagaan sida weyn looga jacel yahay filimaanta Bangladeshi ayaa haatan gabadhiisa Ananya Pandey wey weynaatay waxayna diyaar u tahay in sanadaha soo socdo bollywood-ka kuso biirto. Ananya Pandey…
Jilaayaasha hada bollywood-ka ka xamaasho gaar ahaan jiilka cusub waxay kasoo jeedaan qoys awood ku leh bollywood-ka Sidaas ay tahay bollywood-ka waxay saameyn ugu yeeshaan qaab jiliinkooda wacan. Sidoo kale waxaan wada ognahay jiilka cusub ee hada bollywood-ka ka xamaasha badanaa wax kusoo bareen dalka dibadiisa waxaana ka mid ah Shraddha Kapoor. Ugu horeyn Shraddha Kapoor waxaa aabo u ah…
Waxaana wada ognahay in Super Star Shah Rukh Khan door kooban ku lahaa filimka Tubelight wuxuuna ku matalaayay qof awood siinaayo Salman khan kaaso lagu magacaabo Gogo Pasha. Doorka Srk ee Tubeligh waxaa usoo bandhigay Salman Khan kamana diidin haddaba waxaana idin heynaa war farxad taageerayaasha Srk Iyo Sallu Bhai. Warbaxinta maanta la hadal haayo ayaa ah in Srk filimkiisa…
MUUQAAL: iidle Yare oo Muqdisho ka sheegay in Iqra Yare Xaaskiisa ay tahay iyo Bandhigii Ciida ee Xiisaha Badnaa
Fanaannka Iidle Yare oo Barnaamijka Ciida ka tumay magaalada Muqdisho, ayaa Halkaasi ka sheegay inay Iqra Yarey tahay Xaaskiisa, Kadibna waxay Halkaasi ka wada qaadeen Hees. HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA MUUQAAL: iidle Yare oo Muqdisho ka sheegay in Iqra Yare Xaaskiisa ay tahay iyo Bandhigii Ciida ee Xiisaha Badnaa